နယ်ကနေလှူချင်ပါတယ်၊ ဘဏ်ကနေငွေလွှဲလိုက်ပါ့မယ်။ သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်မည်ဆိုပါက အနီးဆုံး(သွားထုတ်ယူနိုင်မည့်)မွေး/ရေဘဏ်တစ်ခုကိုပြောပါ၊ထုတ်ယူမည့်သူ နာမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်ကို ဦးကြောင်လေးရဲ့ ပီအမ်ကိုပို့လိုက်ပါ။
ကိုကြောင်လေးရေ … အသေးစိတ်ကို အီးမေးလ်ကနေတဆင့် ပြန်ပို့ပေးပါမယ် ။ မန္တလေးက ဘဏ်ကို လွှဲပေးရမှာပါ ။ ရွှေတိုက်စိုးတယောက် မန္တလေးသွားရင်း ဝင်ထုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ် … ။
အင်မတန်မှကို လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်မို ့လို့တတ်အားသရွေ ့ကူညီပါမယ်။
မန္တလေးဂေဇက် ကောင်းမှုပေါ့ဗျာ နော် မမအိတုံရေ…
ဟိုက်… အလှုခံပါတယ် ဆိုမှ … အနီတွေ က..ဘာကြောင့်လဲ ..?
စာဖတ်ပြီးကတည်းက လှူဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဖုန်းတောင် ဆက်ကြည့်မလို့။ သူများတွေအခြေအနေကြည့်နေတာ။ အခု လက်ခံပြီဆိုရင်လဲ လှူချင်ပါတယ်။ နောက်မှဆို သဒ္ဓါတရားဆိုတာလဲ ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လေ။ လှူစရာကလဲ ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ နဲသည်များသည်မဟုတ် လက်ထဲရှိနေတုန်းလှူချင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း လှူချင်ပါတယ်ဗျာ။ အိတုန် ဖုံးနံပါတ်ကို ဆက်လို ့ရလားမသိဘူး။ ကျနော်က ဟွန်ဒီနဲ ့လွှဲရမှာဆိုတော့ သွားထုတ်ပေးမဲ့လူ လိုသေးလို ့ပါ။ 0973144421/ etone
ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် အကြောင်းပြန်ပေးပါဗျာ။ wgdperth@gmail.com ကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဂျီတော့မှာ အက်ထားစေချင်ပါတယ်။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူချင်တဲ့အတွက်တော့ သာဓုပါနော့ ။
ကျွန်မတို့ ဒီနေ့ ဘဏ်မှာ အကောင့်သွားဖွင့်ပါမယ် … လှူဒါန်းတဲ့ လူတွေလည်း ဘဏ်ကနေတဆင့် ငွေသွင်းပြီး လှူဒါန်းလို့ရပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားငွေ လက်ခံလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ ဘဏ်တွေကတဆင့် လှူဒါန်းမယ်ဆိုလျှင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ် ။
ဘဏ်ကနေ လွှဲလို့အဆင်မပြေတော့မှ တခြားနည်း စဉ်းစားတာပေါ့ … ။ အီးမေးလ်ကိုလည်း မှတ်ထားပါတယ် ။
နာရေးကူညီအသင်းမှာ သွားလှူဖို့စိတ်ကူးမိတာ ကြာပါပြီး တစ်ယောက်တည်း အားနဲ. မတတ်နိုင်လို.ပါ အခုလို. မန်းဂေဇက်က ရွာသားတွေနဲ. အတူစုပေါင်းလှူခွင်.ရတော.မယ်ဆိုတော. ဝမ်းသာမဆုံးပါခင်ဗျာ
သကြီးမင်းခင်ဗျား-ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့မြိုးအနှံ့ကတော့ သာဓုအနုမောဒနာ(၃)ကြိမ်းခေါ်လောက်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ humanitarian ကိစ္စတွေမို့ နှစ်သစ်မှာ ပီတိတွေဝေမိပါတယ်။
ပြည်ပရောက် MG တွေရော ဘယ်လိုကဏ္ဍကပါသင့်မလဲ?
ပြည်ပက.. မြန်မာပြည်ထဲ ဟွန်ဒီနဲ့တုံမမတို့ဆီ တိုက်ရိုက်.. တဦးချင်းဆီလှူမှဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..။
သိတော်မူတဲ့အတိုင်း.. စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဥပဒေတွေနဲ့..တရားဝင်ငွေလွှဲငွေယူလုပ်လို့မရတော့.. အန်ဂျီအိုလိုဖန်ရေ့စ်လုပ်ပြီး ငွေစုဆောင်းလို့ခက်ပါတယ်..။
ကိုရင်ဘုန်းကျော်ကိုလည်း.. ဟွန်ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သာသွားမို့.. တိုက်တွန်းလိုပါတယ်..။
မြန်မာပြည်ဖက်မှာလုပ်ပေးမဲ့သူတွေရှိနေရင်.. တဦးချင်းတိုက်ရိုက်သွားတာက.. ကြားစရိတ်အကုန်အကျအနည်းဆုံးနဲ့..အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်..။
ဟုတ်တယ် ကိုခိုင် ပေပယ်နဲ့ ၃၀ဝ ပို့တာ ဒီမှာလဲ၂ဝ ထပ်ပေါင်းပြီး ဆရာ့ဆီရောက်တော့ ၂၈ဝ ဖြစ်သွားတယ် (သူက၄ဝယူသွားတယ်)
ဆောင်ရွက်ခဈေးကြီးသလိုပဲ ဘတ် (မြန်လဲမြန်တယ် အဆင်လဲချောတော့ သုံးလို့တော့ကောင်းပါရဲ့)
အရမ်းကို အားရစရာကောင်းတာကတော့ အမာခံ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေပါ တတ်အားသရွှေ့ ကုသိုလ်ယူကြခြင်းပါပဲ ။ တစ်ချို့ကလည်း အလှူငွေပါဝင်ချင်လို့ မန်ဘာဝင်ပြီး ဆက်သွယ်ကြတယ် တချို့ကလည်း နယ်ကတဆင့် ဆက်သွယ်ကြတယ် …. ။ ဘယ်နေရာမှာ အလှူခံမလဲ လာပေးမယ်ဆိုတဲ့ စာဖတ်သူတွေလည်းရှိတယ် … ။
ဒီတော့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ဒီနေ့ နေ့လည် ဘဏ်ကိုသွားပြီး မန္တလေးဂေဇက် နာမည်နဲ့ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါမယ် ။ လှူချင်တဲ့ လူတွေလည်း အချိန်မရွေးဘဏ်ထဲသွားထည့်လို့ရအောင် ရည်ရွယ်တာပါ ။ (ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ပြောပေးပါမယ် ) နည်းတာ များတာ အဓိက မဟုတ်ပဲ … ဘဏ်မှာ စာရင်းသွင်းပြီးလှူလျှင် ပိုပြီး စနစ်တကျ စာရင်းသွင်းထားနိုင်မယ် ထင်လို့ပါပဲ … ။
အရမ်းကို ကြည်နူးမိပါတယ်ဗျာ.. မန်ဘာများရော မန်ဘာမဟုတ်တဲ့စာဖတ်သူများရော.. သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာဝိုင်းဝန်းလှူကြတာ အားရစရာကောင်းလိုက်တာ.. အခုလိုလှူကြတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
မရမက လာရှာပြီးလှူတဲ့သူရော.. လာကတည်းက အလှူငွေကိုင်ပြီး လှူတဲ့သူတွေရော ကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးလွန်းလို. ရ ရက်နေ.က ရေနွေးသုံးအိုးကုန်သွားပါတယ်..
အခုလို အလှူ.ရှင်တွေကို ရင်ထဲ၊အသဲထဲ၊အူထဲက (တစ်ကိုယ်လုံးထဲက) ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
အခုလို စုပေါင်းအလှူလေးလုပ်ဖြစ်တာ အရမ်းကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ် ..
ရွာသူားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း အားတက်သရော ပါဝင်လှူဒါန်းကြတာ တကယ့်ကို ကျေနပ်အားရစရာကောင်းပါတယ် …………
တစ်ခုပဲ တစ်ယောက်ထဲ လာလို့ဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်ပြီး ရေနွေးခွက်လာလုသွားတာကိုပါ ..
ဒါပင်မယ့် ရေနွေးသုံးအိုးလာတော့ အကြွေးဆိုပြီး ပြန်တော့ ဆပ်သွားပါရဲ့ …………
အစ်မရေ .. တစ်ယောက်တည်းဆို အားငယ်နေရတယ်မို့လား အနိုင်ကျင့်ပြီးရေနွေးလုသောက်မယ့် လူတွေကလည်းရှိတော့ နောက်တခါဆို ဗလတောင့်တောင့် ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ငါကွကြီးပါ ခေါ်ခဲ့ပါလို့ …. ။
Yes, I totally agreed. I do admire you and MG villagers. Please go ahead one after another.We will follow.
မန်းလေးကလူဆိုရင် ယခုပိုစ်ထဲမှာပါသော ပေါက်ပေပု၏ဖုန်းကိုဆက်လိုက်ပါ
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာရောက်လက်ခံယူ၍ လက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပါမည်။
အလွန်ပင်အားရ ကြည်နူးမိပါတယ်..ရွာသူား များအားလုံး ယခုလိုစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမူပြုခြင်းသည် ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ အဖြာဖြာ နဲ့ပြည့်စုံပါပေတယ်…မန်းဂေဇက်ရဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပူးပေါင်းပါဝင်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ…
သင်္ဘောက ပြန်လာပြီး နားနေရတဲ့ အချိန်တွင်းမှာတောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပါးဖို့ အချိန်တွေ လျှော့ပြီး အလှူငွေ လိုက်လံ ကောက်ခံပေးနေတဲ့ ET ကို ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် … ။
ရောင်ခြည်ခကလဲ ဆက်သွယ်လာပြီ လှူမယ်တဲ့။
etone ရေ.အခုမှဒီပိုစ့်ဖတ်မိလို့။ ဖေဖေါ်ဝါရီအမှီတော့လှူပါ့မယ်နော်။ အခုကရန်ကုန်ကိုငွေလွှဲပြီးသွားလို့။ အခုလဲဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်ထားလိုက်ပြီနော်။
တောင်တန်း က မောင်ဆန်း says:
မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကနေ လှူလို့ ရမရလဲ သိချင်ပါတယ် …
တောင်တန်းက မောင်ဆန်းရေ … ခဏလောက်စောင့်ပါဦး … ဒီနေ့ဘဏ်သွားတဲ့ လူဆီက ဖုန်းအဝင်ကိုစောင့်နေပါတယ် …. သိသိချင်း အက်ပ်ဒိတ်လုပ်ပေးမှာပါ … ။
မနေ့က ဘဏ်သွားတဲ့ လူက သုံးနာရီကျော်မှ ရောက်သွားလို့ ဘဏ်ပိတ်သွားပါသတဲ့ … ။ နောက်ဘဏ်တစ်ခုကို ထပ်သွားတော့လည်း … သူလည်း သုံးနာရီလောက်မှာ ပိတ်တယ် … ။ ပိတ်တယ်ဆိုတာက ငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ်မလုပ်တော့တာကိုပြောတာပါ .. ဘဏ်အလုပ်သမားတွေကတော့ … ဘဏ်အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတုန်းပါပဲ … ။
နောက်လှူမယ့်အလှူတွေမှာလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်အောင် ကျိုးစားသွားပါ့မယ်…..
ရောင်ခြည်ခရေ… လေးပေါက်ဆီ ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းရထားပါတယ် .. ပါဝင်ကုသိုလ်ယူတာ ကျေးဇူးပါနော်။
ကျနော်ဒီနေ့ပဲ အလှူငွေ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်နော်….နောက်လှူမယ့်အလှူတွေမှာလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်အောင် ကျိုးစားသွားပါ့မယ်…..
မန်းလေးမှ ဖရဲသီးကလည်း လာရောက်လှူဒါန်းထား၍ငွေလက်ခံပြီးပါကြောင်း
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပေးပြီးပါပြီ ။ မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် (အလုံဘဏ်ခွဲ) မှာပါ ။
အကောင့် နံပါတ်ကတော့ 0061110002685 ပါပဲ … ။
ဘဏ်ကို တိုက်ရိုက်သွင်းနိုင်ပါပြီ ။
အလှူရှင်နာမည်နဲ့ ရွာထဲ ဝင်ရေးနေတဲ့ nick တွဲမိဖို့ တော့ ကျွန်မတို့ဆီ တစ်ခါတော့ဖုန်းဆက်ပေးပါဦးနော့ ။
ကျွန်တော် ခတမန်းလေး ရောက်နေဆဲ မို. လုပ်အားပါဝင်ကူညီပေးသော လိုက်လံကောက်ခံပေးသော ကို အီတီ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ… Thank you very much..
အရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ အမလဲ နောက်အပတ်ထဲ မြန်မာပြည်ကို လှူတဲ့ငွေ လွှဲလိုက်ပါ့မယ်။
ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ ရမ်းသမ်းအော်သံတွေကြားကပဲ စာဖတ်သူတွေသဒါ္ဓမပျက်ပဲ အလှူငွေထည့်ဝင်ဖို့ အင်ကွာရီလုပ်လာကြပြန်ပါပြီ … ။ အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း အလှူငွေထည့်မည့်လူတွေဆီ လက်လှမ်းမှီသလို ကောက်ခံပေးကြသလို ၊ ဘဏ်ကနေ တိုက်ရိုက်ငွေသွင်းဖို့ စုံစမ်းမှုတွေလည်း ရှိလာပါတယ် ။ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပါဝင် လှူဒါန်းသူ ၊ ကုသိုလ်ယူ လုပ်အားပေးသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ရွာသား ဓါတ်ပုံဆရာ ရွှေမင်းသားမှ လာရောက်လှူဒါန်းသွားပါကြောင်း။
ရောင်ခြည်ခမှ လဲငွေလွှဲထားပေးသောလည်း သွားရောက်မထုတ်ရသေးပါကြောင်း။
ပထမဆုံးခြေလှမ်း ခိုင်ခိုင်လှမ်းဖြစ်တာကို ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
xman ဆိုတဲ့ ဗေဒင်ရူး အဲလေ ယောင်လို့ ဗေဒင်ဝါသနာရှင်တဦးကလဲ (ရန်ကုန်နေတာချင်းအတူတူ လူလည်ကျပြီး) သူ့ကိုယ်စားအလှူငွေထည့်ပေးဘို့ ကျွန်တော့်ကို တာဝန်ပေးပါတယ်။
ဘဏ်သွားရမှာပျင်းသေးလို့ နောက်တပတ်လောက်မှ ငွေသွားသွင်းလိုက်ပါမယ်။
small cat ၊ မအိအိရှိန်၊ fatty cat ထံမှ အလှူငွေများ လက်ခံရရှိပါသည်။ မန်းဂေဇက်စုပေါင်းအလှူတွင် ယခုလို ပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမဆုံး ဖြစ်မိပါတယ်။ ကွန်ပူတာ မသုံးတာကြာတာနဲ့မြန်မာလိုစာရိုက်တာတောင် မေ့ကုန်ပီ
အလှုလည်းဖြစ်၊ရွာသားတွေလည်းစုဆုံခွင့်ရ ဆိုတော့ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ရ အလွန်ကောင်းမြတ်ပါကြောင်း
ဘကြီးလည်းတတ်အားသရွှေ့ ပါဝင်ပါမယ်ဗျား။သာဓုပါ ခင်ဗျား။
ကောင်းပါတယ်….. ခုလို ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အစ်မ Rose နဲ့ ပူးပေါင်း လှူဒါန်းပါ့မယ် မ Eton ရေ……..
ဆက်လည်တည်တံ့ ရုံသာတည်း ။
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ၊ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ၊ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (တစ်ဘဝသာသနာ – စာမျက်နှာ ၃၈၉)
မအိတုန်ရေ ရန်ကုန်က အလှူငွေ လက်ခံတဲ့သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို kyawtheinmyint23@gmail.com ကို ပို့ပေးပါလားခဗျာ ကျနော်ကအဝေးမှာမို့ ညီဖြစ်သူကို သွားလှူခိုင်းရမှာမို့လို့ပါ။
ရန်ကုန်မှာဆိုလျှင်တော့ … ဘဏ်ကို သွားထည့်တာက ပိုပြီး စနစ်တကျဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ။ ဘဏ့်အကောင့်နံပါတ်ကို အပေါ်မှာ ရေးပေးထားပါတယ် … ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အဆင်မပြေဘူုးဆိုလည်း ရန်ကုန်မြို့ကလူတွေကို ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်တွေ ပို့စ်ထဲရေးပေးထားတာမို့ …. အဲ့ဒီအတိုင်းခေါ်လို့ရပါတယ် .. ။
မေးလ်ကနေလည်း ဒီတေးစာပြန်ပါဦးမယ် ။
-ကော်မန့် ၁၀ဝ ကျော်စေချင်တာ၊(^^) ကိုယ်က (၁၀၀)မြောက်ကော်မန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
-ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ (မသေခင်အသက်လုပြီး)ဆေးဝါးမကုသနိုင်သူတွေကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့
အစီအစဉ်လဲ အဲဒီမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ အသိတယောက်ပြောတာကြားဘူးတယ်။
သေပြီးသူမှာလည်း ဒုက္ခရှိသလို ၊ မသေခင်ဆေးရုံတက်နေသူများမှာလည်း ဒုက္ခမသေးလှပါဘူး
ကိုသစ်မင်းရဲ့ စိတ်ကူးလေးလည်း ကောင်းပါတယ် … ။
ဟုတ်ပါတယ် …ကျွန်မတို့မှာ အကြံလည်း ရှိပါတယ် … မြင်လည်း မြင်တွေ့နေရတဲ့ အခြေနေမျိုး၊ လုပ်လည်း လုပ်သင့်တဲ့အခြေနေပါ … ။
2011 ၊ ဖေဖော်ဝါရီ လဆန်းမှာ AKKO ဆေးရုံတက်ရတယ် … အသေးစား အောပရေးရှင်းအတွက်မို့ သူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာပဲ တက်ဖြစ်ခဲ့တယ် … ။. ဝေါဒ့် ၇/၈ (ယောကျင်္ားလေးဆောင်)မှာ သီးသန့်ခန်းယူပြီး ငါးရက်တက်ခဲ့ရတယ် … ။ ငါးရက်နေခဲ့စဉ်အတွင်း အမျိုးမျိုးသော လူတွေရဲ့ ပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကို မြင်တွေ့ပြီး …. လှူချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သေးတယ် .. ။ လူနာလာမေးတဲ့လူတွေဝယ်လာတဲ့ မုန့်တွေ ၊ ကော်ဖီတွေ ၊ သစ်သီးတွေကို … တဆင့်ပြန်ပြီး …အဲ့ဒီအဆောင်က လူတွေအားလုံးကို အညီမျှခွဲကျွေးခဲ့ဖူးတယ် … ။
မှတ်မှတ်ရရအနေနဲ့ သည်းခြေကျောက်တည်တဲ့ လယ်သမား ယောကျာ်းတယောက်ကို ခွဲစိတ်ခနဲ့ ဆေးဝယ်ဖို့ တာဝန်ယူပေးခဲ့တယ် … ။ လယ်သမားခမျာ သည်းခြေကျောက်ခွဲဖို့ မြို့တက်ဖို့ ရာ … အိမ်ဝိုင်းလေးပါ ပေါင်ခဲ့ရတယ်တဲ့ …သမီးလေးကိုလည်း သူများအိမ်မှာ ခဏအလုပ်လုပ်ရင်းဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားထားခဲ့ရတယ် ။…… ပိုက်ဆံလေး သုံးလေးသောင်းကို မတတ်နိုင်ရှာလို့ …. စိတ်ဓါတ်တွေကျနေရှာတယ် … ။
ပိုက်ဆံကူညီတာ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ အတင်းလိုက်ကန်တော့တာ …. အောပရေးရှင်းလုပ်ထားတဲ့ AKKO တစ်ယောက် ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ ထွက်ပြေးရပါလေရော
ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူ ၊ အနည်းငယ်တတ်နိုင်တဲ့လူအများစုက အစိုးရဆေးရုံထက် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေမှာ ကုသမှုခံယူကြတယ် …. ။ အစိုးရဆေးရုံတက်လာသူ အများစုက နွမ်းပါးကြတယ် … ဒီအချိန်မှာ မြက်တပင်တောင် သူတို့အတွက် အားဖြစ်စေပါတယ် … ။
နောက်ပိုင်း အလှူတွေကိုလည်း ….တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာမျိုး၊ နိုင်ငံရေးမနွယ် ၊ ဘာသာရေးမရောတဲ့ နေရာမျိုးကိုပဲ လှူသွားဖို့ စိတ်ကူးပါတယ် …. ။
တိန်ဂျီး က နေပြည်တော် က ကိုး ။
ဂေဇက်က နေဝန်းနီ နဲ ့တော့ ၊ တွေ ့ချင်ရင် တွေ ့လို ့ရနိုင်မယ် ဗျ
တခြားမြို့တွေကလည်း လှူလို့ရပါတယ် … ဘဏ်ကနေတဆင့်လွှဲရမှာပါ … ဘယ်ဘဏ်ကပဲလွှဲလွှဲ … ဘဏ်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီး MOB ဘဏ်က အကောင့်ထဲ ထည့်ပေးလို့ရပါတယ် …. ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်… ငွေလွှဲပြီးပြီဆိုလျှင်တော့ အကြောင်းကြားပေးစေချင်ပါတယ် ..ဒါမှ နာမည်နဲ့တကွ record လုပ်နိုင်မှာပါ … ။
နေပြည်တော်က စာဖတ်သူ တဦးလည်း … ပေးပို့လှူဒါန်းထားပါသေးတယ် … ။